राष्ट्रिय युथ बक्सिङले ल्याएको उत्साह | Narendra KC
राष्ट्रिय युथ बक्सिङले ल्याएको उत्साह
Posted on June 2, 2013 by narendrakc
दाङमा २१ बर्षपछि भएको राष्ट्रिय युथ बक्सिङ प्रतियोगिताले यस क्षेत्रका खेलाडीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । यो प्रतियोगिताले दाङमा २७ जिल्ला र आठवटा क्लवका ३५ टीम खेलाडीहरुको भेला मात्र गराएन खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र अन्य प्रतिनिधिहरु गरी तीन सय बढीको राम्रो जमघट पनि गरायो । चर्को घाम होस् वा पानीको झरीलाई बेवास्ता गरेर दर्शकहरुले खेलप्रति देखाएको चासोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि प्रतियोगिताले यस क्षत्रमा राम्रो उत्साह सिर्जना गरेको छ ।
दाङमा भएको यस प्रतियोगिताले यहाँका खेलाडीहरुलाई उत्साहित मात्र बनाएन, प्रतियोगितामा यहाँका खेलाडीहरुले उल्लेख्य बर्चस्वसमेत कायम गरे । घरेलु मैदानमा भएका खेलमा यस क्षेत्रका खेलाडीहरुले बर्चस्व कायम गर्नु स्वाभाविक पनि मान्न सकिएला तर जहाँ भएको भए पनि राष्ट्रिय खेल भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा यहाँका खेलाडीहरुको प्रतिभा प्रष्फूटन गर्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
यो प्रतियोगिताले स्थानीयस्तरमा ल्याएको उत्साह र खेलमा कायम गरेको मोफसलका खेलाडीहरुको बर्चस्वलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने मोफसलमा प्रशस्तै खेल प्रतिभाहरु लुकिबसेका छन्, जसले प्रतिभा देखाउने पर्याप्त अवसर पाएका छैनन् । यो प्रतियोगिताको सफलतासँगै यसबाट सिक्नुपर्ने शिक्षा के हो भने बक्सिङ मात्र होइन सबै विधाका खेलहरुमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्पर्धाहरु मोफसलमा गर्न जरुरी छ । नेपालमा खेल क्षेत्र निकै पछाडि परेको छ । एक त यहाँ पर्याप्त प्रतियोगिताहरु नै हुँदैनन्, जति हुन्छन् ती पनि केन्द्रिकृतरुपमा हुने गरेकाले स्थानीयस्तरमा लुकिबसेका प्रतिभाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । खेल क्षेत्रको विकास गर्न यहाँ स्पष्ट गुरुयोजनासहितको नीति कार्यक्रम छैन । केही भएका खेल कार्यक्रमलाई पनि सम्पन्न गर्ने पर्याप्त बजेट छैन । विभिन्न दाताबाट चन्दा उठाएर प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्था रहँदासम्म खेलको उचित विकास त हुन सक्दैन नै, तर पनि स्थानीयस्तरमा हुने खेल प्रतियोगिताहरुले खेलको विकासका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र खेलाडीहरुको उत्साह जागृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । हामी नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं । राज्य पुनर्संरचनाको बहस पनि चलिरहेको छ, यद्यपि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संविधान निर्माण र राज्यपुनर्संरचनाको बहससँगै खेल क्षेत्रको पुनर्संरचना वा विकासको कुरा पनि जोड्न जरुरी छ ।
अहिले थोरै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु हुने र त्यो पनि राजधानीकेन्द्रित प्रतियोगिता बढी हुने गरेको सन्दर्भमा अब भोलि मुलुक संघीयतामा गएसँगै खेललाई पनि बिकेन्द्रित कसरी बनाउने ? प्रदेशहरुले खेल क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? प्रदेशहरुमा खेलकूदसम्बन्धी कुन सरकारी निकायहरु रहने ? आदि बिषयमा पनि अहिलेदेखि नै बहस जरुरी छ ताकि भोलि मुलुक संघीयतामा गएसँगै हरेक प्रदेशबीच नयाँ नयाँ प्रतियोगिता र नयाँ नयाँ खेलाडी उत्पादन तथा पुराना खेलाडीको संरक्षणमा प्रतिष्पर्धा हुन सकोस् ।
अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सबैको ध्यान राजनीतितर्फ केन्द्रित छ तर सँधै यस्तो हुँदैन ।
देश जति जति समृद्धितर्फ अघि बढ्छ, त्यो देशको खेलको विकास पनि त्यत्तिकै अघि बढ्छ किनकि खेल नै त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले त्यस मुलुकको पहिचान र समृद्धिलाई अभिव्यक्त गर्दछ । खेल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्धित देशको पहिचान र गौरव अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भने आन्तरिमरुपमा राष्ट्रिय एकताको आधार पनि हो । त्यसैले खेलको विकास गर्नु केवल खेलाडी वा खेलप्रेमीको लागि होइन समग्र राष्ट्रकै विकासका लागि हो । अहिले दाङमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय युथ बक्सिङजस्ता राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुले राष्ट्रकै विकासका लागि योगदान दिनसक्छन् । यस्ता प्रतियोगिताहरुको निरन्तरताका लागि राज्य र अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।